Fashion house Marc Jacobs - akanjo, kiraro, ditin-kazo, kitapo, fiambenana, solomaso
Marc Jacobs - ny tantaran'ilay mpamorona mamirapiratra sy ny zavakanto tsara indrindra
Fantatrao ve ny zavatra lazainy momba ny mpamorona ny marika malaza Marc Jacob? Ireo manam-pahaizana manokana amin'ny lamaody iray dia miady hevitra, satria tsy misy marika marika, na ny kitapom-behivavy , ny akanjo hariva na ny kiraro fanatanjahan-tena - dia mety ho zavatra tsara izy, ka ny ankizivavy rehetra dia te-hanandrana avy hatrany, mividy.
Marc Jacobs - tantaran'ny marika
Ny marika Marc Jacobs dia naorina tamin'ny 1986. Ireo fanangonana voalohany nataon'ilay mpamorona dia feno hatsaram-panahy, fifangaroana ary zavatra iray mahafinaritra. Tamin'io fotoana io tao amin'ny indostrian'ny lamaody dia zavatra vaovao, toy izany dia manjavona avy hatrany ao amin'ny fahatsiarovana, izay tianao hanahafana azy. Mazava tsara hoe nahoana i Mark Jacobs ao amin'ny Conseil des Fashion Designers de America no nandresy ny praiminisitra Perry Ellis nandrasana hatry ny ela. Ny loka avy amin'io fikambanana io dia midika fa ny fananganana zatovolahy iray manan-talenta dia nekena ho isan'ny zavakanto sy kolontsaina Amerikana.
Ankoatra izany, i Jacobs dia noheverina ho mpamorona tsara indrindra. Ny mpamorona ny marika dia tsy maniry ny mieritreritra tahaka ny olon-drehetra, ka dia manomboka mamoaka zavatra lafo izy amin'ny rambony. Ohatra iray mampihetsi-po amin'izany ny sodimbazam-pandriana kapoaka. Marika Creative Marc Jacob dia liana amin'ny mpitarika lamaody. Anna Wintour tenany, ilay tonian-dahatsoratry ny American Vogue, dia manoratra lahatsoratra momba ny marika vaovao. Misy zavatra tsara tarehy ao amin'ny fanangonany, vaovao, afaka manintona avy hatrany ny olon-drehetra. Aza mino izany, fa ao amin'ireo fampisehoana i Marc Jacob dia manaiky ny fandraisana anjara malalaka nataon'i Christy Turlington, Naomi Campbell .
Ary tamin'ny 1997, nanokatra ny trano fivarotana voalohany i Marc Jacobs, izay miorina ao afovoan'ny faritra malaza Soho, any New York. Ity hetsika ity dia nahatonga ny fisokafan'ny trano famokarana manerana an'i Etazonia. Vetivety dia afaka mividy lehilahy sy vehivavy lamaody lamaody any Eoropa ny vondrona grunge - ny fivarotana ny marika malaza nosokafana tany Paris, Londres, Milan ary Madrid. Tamin'ny taona 2001, nanapa-kevitra ny hanitatra ny laharan-dalany ny mpamorona ny marika ary namorona an'i Marc avy amin'i Mark Jacobs, izay ahitana akanjo sy akanjo ary akanjo hafa, izay tolo-kevitra ho an'ny fanangonana tany am-piandohana.
2006 ny marika dia manamarika ny taona famotsorana ireo menaka enina, anisan'izany ny fofom-behivavy nahazo ny mari-pofana vavy Marc Jacobs Daisy, saingy bebe kokoa izany amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Tsy ela i Mark dia nanolotra izao tontolo izao miaraka amin'ny kiraro akanjo sy akanjo ankizy antsoina hoe Little Marc Jacobs. Tamin'ny taona 2008, dia maro ny karazana fofona mahavariana no novokarina, izay tsy vitan'ny vehivavy tsotra ny lamaody, fa maro be koa ny olo-malaza.
Ny Fashion House Marc Jacobs dia mamorona vokatra izay mampiditra ny fahalalahan'ny famoronana. Ny fanangonana tsirairay avy amin'ilay marika dia ohatra iray mazava tsara amin'ny fomba tokony hijerena ny lamaody an-tanan-dehibe na, araka ny fomba mahazatra azy hiantso an'ity fomba ity, mahazatra. Ny famoronana ny mpamorona - fitaovana tsara avo lenta, ny lamaody farany amin'ny lamaody, ny fifantohana manokana amin'ny antsipiriany sy ny fomba tokana. Ireo dia modely tena tsara, nalaina avy tamin'ny lamba lafo vidy.
Raha miresaka antsipiriany bebe kokoa momba ny famoriam-bola tsirairay ianao, ohatra, mba hanorenana hatsarana amin'ny lohataona amin'ny fararano amin'ny taona 2018, dia nahazo tsindrim-peo avy amin'ny vahoaka New York manerantany ny mpamorona azy. Eto dia manana cardigans gardy ianao, toy ny akanjon'olon-dronono, akanjo maotina, ary akanjo maizimaizina. Ny iray dia tsy afaka manampy fa ny hianjady amin'ny angom-bokatra tsy misy loko sy ny kitapo fehikibo - ny fironana fototra amin'ny taona manaraka.
Ary ny lohahevitry ny kolontsaina hip-hop tamin'ny fararano sy ny ririnina. Nanamarika ilay mpamorona fa amin'ny endriny vaovao amin'ny akanjo izy dia naneho ny fanajany ireo mpanorina ity karazana ity, noho izany dia manana fahafahana hankasitraka ny fomba maoderina an-dalambe. Noho izany, eo amin'ny toerana misy azy ireo, dia nahita ny fomban-tsekoly efa antitra nandritra ny taona 80 sy 90 ny izao tontolo izao: fanatanjahan-tena ara-panatanjahan-tena, pataloha, paompy velorano, kiraro retro, akanjo fohy, kitapo akanjo, peta-drindrina volamena.
Dresses avy amin'i Marc Jacobs
Ny akanjon'ny vehivavy Marc Jacobs - zavatra mahagaga, tsy manam-paharoa ary tsy misy izany. Raha mivavaka amin'ny vahoaka ianao, dia alaivo sary an-tsaina ny fanorenana fako any New York. Ny akanjony dia lohahevitra samihafa, izay azonao resahina mandritra ny ora maro. Ohatra, nandritra ny famoriam-bahoaka tamin'ny 2017, izay nanavaka indray ny tenany tamin'ny tsy fahaizan'ny saina sy ny korontana, dia nasehon'ity tontolo ity tamin'ny akanjo marevaka ny fanahin'ny nostalgia. Airy tuxedo skirts , fanontana mamirapiratra, modely miloko mareva-doko, voaravaka sarimihetsika mamy - avy amin'ny zava-drehetra manodidina ny loha.
Ny trano fonenan'i Marc Jacobs dia tsy mitsahatra mamorona akanjo izay mahavariana. Ny fofom-janak'ireo tandindon-damba dia novaina modely miaraka amin'ny vokatr'ilay fanakanana loko, miaraka amin'ny zipo-tsipika eny an-doharano. Ireo dia satroka marevaka miaraka amin'ny loko marevaka, izay manolo-batana ny stylist amin'ny akanjo mipetrapetraka, ny "boyfriends" miaraka amin'ny kofehy mainty eo amin'ny andaniny, izay, miaraka amin'ny fehin-damosina marevaka, dia manjavozavo kokoa.
Kiraro ho an'ny vehivavy Marc Jacobs - kiraro tena mahavariana eo amin'ny sehatra goavana, natao ho an'ny olona miavaka. Ity no kiraro taloha, modely amin'ny endriky ny grunge sy glam-rock. Izany no hatsarana amin'ny endriny izay manamarika ny Gothique Victorie sy ny pästetics. Inona no azoko ambara? Samy hafa be ny zavatra noforonina. Misy toerana iray ho an'ny kiraro, izay tsy dia manaiky ny hametraka vola ho an'ny olona ny salan'isa, fa misy ihany koa ireo modely izay hanoritra ny endriky ny fashionista, ho lasa vovony.
Tsy azo atao ny tsy hiankin-doha amin'ny kiraro vita amin'ny hoditra hoditra mainty sy manga manga. Ary ahoana ny tianao atao amin'ny sambon'ny sôkôla sôkôla amin'ny sôkôla izay mamoritra ny birao sy ny hariva? Ary ny booty mena eo amin'ny valopy dia afaka manova avy hatrany ny endriny mampihetsi-po? Ankoatra ny fandefasana baoty eny amin'ny lampihazo, Mark dia manana kiraro ho an'ireo izay tia zavatra misy endrika voatahiry - kapa miaraka amin'ny miloko marevaka miaraka amin'ny takelaka kely amin'ny endriky tsipìka mahafinaritra.
Ballet-Mouse Marc Jacobs - iray amin'ireo modely malala indrindra amin'ireo mpanjifan'ity marika manan-danja ity. Ilaina ny manazava fa taona vitsivitsy lasa izay dia navotsotry ny sehatry ny marika Marc avy Marc Jacobs. Ary aoka tsy hijanona intsony ity marika tanora ity, ny vehivavy mody tsy mitsahatra midera ny "sour". Ankoatra azy ireo, ny mpanamboatra dia tsy reraky ny mamorona loko marevaka amin'ny loko malefaka, fotsy mainty sy fotsy, mampahatsiahy ny kiraro ao amin'ny style Chanel . Ary ahoana no tianao ho tsara tarehy amin'ny tsipìka goavana? Tianao àry ny hametraka azy amin'ny asa fa tsy sambo tsy mampifaly, sa tsy izany?
Kiraro ho an'ny vehivavy Marc Jacobs - zavatra izay afaka mampiavaka ny zazavavy rehetra. Eto ianao sy ireo sambo malaza dia mavomavo mavokely miaraka amin'ny rantsana misokatra, ary tricolore suede hatsaran-tarehy, izay hanjary fanokanana tena tsara sy tsy misy fahatarana amin'ny akanjo rehetra. Ny famokarana Laconic amin'ny kiraro mainty hoditra miaraka amin'ny tsipìka mendrika eo anoloana dia hanantona ny tsipika takariva sy ny orinasa. Te hanana zavatra tsy mahazatra ve ianao? Avy eo dia tandremo ny voary fanangonam-bokatra avy any Marka miaraka amin'ny tongotra mandoza be sy ny tongotra maranitra.
Ny boot ireo ririnina Marc Jacobs - izany dia mody malaza sady mahaleo tena. Any amin'ny fararano mena na ririnina volo, mila zavatra mamiratra ianao? Ireto misy balsa misy loko marevaka eo amin'ny voditongotra mafy, ny hatsaran-tarehy mofomamy vita amin'ny paillettes na kiraro maitso mavana, izay tsy azo ovaina mihitsy. Ny mpanamboatra ny marika dia mankamamy ny vahoaka, ary noho izany dia ao amin'ny kirarony kiraro no ahitanao ny booty voalaza etsy ambony amin'ny sehatra avo.
Sakafo Marc Jacobs
Sakona Marc Jacobs, kitapo, paompy, minisitra - izay tsy mamorona marika Marc Jacobs sy ny tariny fotsiny. Ny vokatra dia mahavariana amin'ny endriny, ary noho izany dia maniry ny hameno ny fitaovam-piadiany miaraka amin'ity singa mahafinaritra ao amin'ny gara ity ny tovovavy tsirairay. Ao anatin'ny fanangonana ny marika dia ahitanao kitapo marevaka malaza, modely hoditra kely, loko mihidy, ary ny tonon-taolam-paty, vatana mangatsiaka izay mety hahatsara ny zava-dehibe rehetra.
Sakafom-behivavy mendri-piderana Marc Jacobs
Perfume avy amin'i Marc Jacobs
Marc Jacobs Daisy dia fanahy izay maneho fitiavana sy firavaka. Io no iray amin'ireo menaka voalohany novolavolain'i Alberto Morillas ho an'ny lamaody tamin'ny 2007. Raha miresaka amin'ny antsipiriany amin'ny antsipirihany ianao, dia:
fanamarihana ambony : grapefruit, violet ary donne;
fanamarihana ny "fo" : gardenia sy jasmine;
fanamarihana fototra : vanilla sy musk.
Ary ny rano mamomamo avy any Marc Daisy Jacobs Dream dia mandoa avy hatrany ny hafanana amin'ny rivotra maraina. Mamofony voankazo sy voninkazo vaovao:
fanamarihana ny "fo" : lychee sy jasmine;
fanamarihana fototra : hazo sy fotsy fotsy.
Tamin'ny taona 2009, Marc Jacobs, niaraka tamin'i Jan Vasnier, dia namorona an'i Marc Jacobs Lola - fofom-bika mahafinaritra sy mamy:
fanamarihana ambony : pink pepper, pear;
fanamarihana momba ny "fo" : peonio sy geranium;
Marc Decadence Jacobs dia nahita ny tontolo roa taona lasa izay. Ity menaka ity dia misarika ny saina fa tsy amin'ny endriny ihany, fa koa amin'ny tsirony mahavariana:
fanamarihana ny "fo" : rose, jasmine;
fanamarihana fototra : amber sy vetiver.
Marc Jacobs mijery
Ny fiambenan'ny vehivavy Marc Jacobs dia akanjo maoderina sy lamaody, ny andiany voalohany dia navoaka tamin'ny taona 2006 niaraka tamin'ny orinasa amerikana Fossil. Ny fijerin'i Marc Jacobs dia mifanandrify amin'ny endriky ny teny avo indrindra. Izy ireo dia manantona tanteraka ny tsirony mahatalanjona ny mpanome azy, manampy amin'ny fanehoana ny maha-izy azy. Ny fanatanterahana tsara ny bokotra rehetra.
Ny lasibatra lasopy Marc Marcs dia natao amin'ny fampiasana fitaovana maoderina. Ankoatr'izany, mihaona amin'ny lamaody farany amin'ny lamaody izy ireo, izay nametrahan'ny mpamorona azy fanamarihana ny fomba fanao manokana (izay tsy misy azy?). Ho an'ny maro, tsy mifandray amin'ny lamaody an-dalambe intsony izy ireo, fa amin'ny fomba amam-piraiketana, fanatanjahan-tena ary haitraitra. Ao amin'ny fanangonana tsirairay dia misy toerana ho an'ny modely sy ny minimalist minimalista, voaravaka amin'ny endriny maromaro amin'ny endriky ny kavina, volom-borona ary zavatra hafa.
Fendi Points 2016
Sandals amin'ny sisiny 2015
Fashion Summer amin'ny 2013
Vehivavy mamaofy fanatanjahan-tena vehivavy 2013
Dress Evening Dress 2013
Manicure Bride 2015
Fitsaboana ny fihanaky ny homamiadana miaraka amin'ny fitsaboana ataon'ny olona
Rindrina vita amin'ny plasterboard
Ny ririnina amin'ny ririnina - oviana no mamafy?
Jennifer Garner dia niresaka momba ity tantara ratsy ity miaraka amina tovovavy sy fisaraham-panambadiana avy amin'ny vadiny
Nahoana no miato ny famantaranandro rehefa maty ny olona iray?
Boots eo amin'ny lohalika
Khashlama - fomba fitsaboana sakafo mahasalama, mahavoky ny Caucasiana
Sandwich mofomamy ao amin'ny mikrôla - ny fomba haingana indrindra amin'ny sakafo mahavelona
Lisitry ny vokatra ho an'ny fahavoazana
Ahoana no ahazoana kitapo fitaratra?
Fashion blouses - lohataona-lohataona 2016
Aretina amin'ny aty - soritraretina, fitsaboana